Soosaarayaasha & Alaab-qeybiyeyaasha AP ee darbiga ku dheggan - Shiinaha Warshad AP ah oo gidaar ku xiran
WL8200-WH2 waa 802.11ac wave 2 oo salka ku haya laba qaybood oo heer sare ah oo waxqabadka sare ee wireless-ka (AP) kaas oo taageeraya heerka caadiga ah ee 86 ee rakibidda fudud; waxay ku habboon tahay hudheelka, waxbarashada, dawladda, iyo shabakadaha ganacsiga. Astaamaha Muhiimka ah iyo Muujimaha Muhiimka ah ee Gawaarida iyo wireless-ka helitaanka gigabit WL8200-WH2 oo isku dhafan laba gigabit fiilooyin kor udhaafaya, runti way buuxin karaan shuruudaha bandwidth ee macaamiisha wireless-ka iyo afar gigabit hoos udhig Ethernet-ka kuwaas oo taageera qaabeynta VLAN jilicsan, ee
WL8200-WL2 802.11ac In-derbiga Labada Koox ee Shirkadda Labaad AP
WL8200-WL2 waa 802.11ac oo salka ku haysa qiime helitaan wireless ah (AP) oo ay sii deysay DCN soo dhaweynta iyo warshadaha waxbarashada. WL8200-WL2 waxay taageertaa heerka 802.11AC, wadarta guud ee xarkaha wireless-ka ee 733Mbps. (2.4G band ayaa bixin kara xawaare dhan 300Mbps iyo 5G band oo bixin kara xawaare dhan 433Mbps). Astaamaha Muhiimka ah iyo Waxyaabaha Muhiimka ah ee Fudud ee hawlgalinta WL8200-WL2 ayaa lagu rakibi karaa heer caadi ah oo ah 86 guddi, si dhakhso ah ayaa loogu rakibi karaa iyadoo la hagaajinayo kaliya laba boolal, markaa rakibida hal AP kaliya ...
DCWL-2000WAP (R2) 802.11n Single-band-derbiga ku dhejisan AP
DCWL-2000WAP (R2) waa jiil cusub 802.11n oo kusalaysan barta helitaanka wireless-la'aanta qiimaha badan ee wax ku oolka ah (AP) loona siidaayay soo dhaweynta iyo warshadaha waxbarashada. DCWL-2000WAP (R2) waxay taageertaa heerka 802.11n, hal balastar 2.4G ah oo bixin kara xawaare dhan 300M. Waxaa lagu dhejin karaa jaangooyada heerka 86 iyadoon dib loo dhisin derbiga dhumucdiisuna waa 22mme oo keliya. Astaamaha Muhiimka ah iyo Waxyaabaha Muhiimka ah ee Fudud ee la Dhigi karo - Si dhakhso leh loogu rakibo DCWL-2000WAP (R2) waxaa lagu rakibi karaa heer guddi heerkiisu yahay 86, coul ...